नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): ७२ बर्षीय नेपाली नागरिक चन्द्रबहादुर डाँगी बिश्वकै सवैभन्दा होचा ब्यक्ति भएको गिजिन बुक अफ वल्र्ड रेकर्डले पुष्टी गरेको छ !
७२ बर्षीय नेपाली नागरिक चन्द्रबहादुर डाँगी बिश्वकै सवैभन्दा होचा ब्यक्ति भएको गिजिन बुक अफ वल्र्ड रेकर्डले पुष्टी गरेको छ !
शान्ती र संबिधानका नाममा देश लुटेर खाने, बिदेशीको दलाली गर्दै कुर्सीमा टाँसिने, हत्या आतंकको बलमा सत्ता हत्याएर बुद्धको लुम्बिनी माथि गिद्दे आँखा लगाउने अपराधीका सरदारहरु मात्र छैनन नेपालमा, राम्रो काम गर्ने देखी बिभिन्न क्षेत्रमा देशको कृतिमान राख्ने हरु पनि छन । फेरी थपियो अर्को कृतिमान !
७२ बर्षीय नेपाली नागरिक चन्द्रबहादुर डाँगी बिश्वकै सवैभन्दा होचा ब्यक्ति भएको गिजिन बुक अफ वल्र्ड रेकर्डले पुष्टी गरेको छ । योसँगै उनी बिश्वकै सवैभन्दा होचा जिवित बयस्कका रुपमा दरिएका छन् ।
उनको उचाई नाप्न आएको गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसको टोलीले आइतबार चन्द्रबहादुरको उचाई ५४.५ सेन्टिमिटर अर्थात २१.५ इन्च मात्र भएको प्रमाणित गरेको हो । लैनचौरको क्लिनिक ट्राभल मेडिकल सेन्ज्टरमा २४ घण्टामा तीनपटकसम्म डाँगीको नाम लिइएको थियो । डाँगीको नाप लिन गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसका प्रधान सम्पादक क्रेग ग्लिन्डेसहितको टोली काठमाण्डौं आइपुगेको थियो । टोलीले डाँगी संसारकै सबैभन्दा होचो र जिवितमा सबैभन्दा होचो व्यक्तिको प्रमाणपत्र दिएको छ ।
कान्छा छोरा दोलखबहादुर डाँगीले आइतबार बिहान फोन गरेर यो खबर सुनाउँदा मोतीकला डाँगी गाईवस्तुको गोबर सोहोर्दै थिइन्। उनले खुसी हुँदै भनिन्, 'राम्रो भो, चाँडो घर लिएर आइज।' विश्वमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा होचो मान्छेका रूपमा आइतबार गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डस्मा नाम लेखिएका ७२ वर्षीय चन्द्रबहादुर डाँगीकी भाउजु हुन्, मोतीकला। पश्चिम दाङको पुरन्धारा- ८ रिमखोली निवासी चन्द्रबहादुर काइँली भाउजु मोतीकलासँग बस्दै आएका छन्। चन्द्रबहादुरका आमाबा सानैमा बितेका थिए। उनी ६ भाइमध्ये पाँचौं हुन्। दाजुहरूको निधन भइसक्यो। कान्छा भाइ छुट्टै घरबार गरेर बसेका छन्। ६० वर्षीया काइँली भाउजु मोतीकलाले उमेरमा जेठा भए पनि नाताले देवर चन्द्रबहादुरलाई छोराजस्तो स्याहार गरेर राखेकी छन्।
'मैले काइँलासँग बिहे गरेर आउँदा नै आमाबा बितिसक्नुभएको थियो,' मोतीकला भन्छिन्, 'अरू भाइपट्टिकाले राम्रो मानेनन्, अनि मैले राखेँ। होचो हुनुहुन्थ्यो, छोराजस्तै लाग्थ्यो।'
चन्द्रबहादुर पहिल्यैदेखि ससाना केटाकेटीसँग मात्रै खेल्ने गर्थे। उमेर छिप्पिँदै गए पनि उनमा त्यहीअनुसार चेत पलाएन। उनले पढ्न पनि पाएनन्। 'एक त त्यो जमानामा लेखपढ नै थिएन, त्यसमाथि यस्तो मान्छेले के पढ्छ र भनेर पठाएनन् होला,' मोतीकला भन्छिन्, 'आफ्नै दाइभाइले घरैमा बाह्रखरी सिकाए, नाउँसम्म लेख्न सक्नुहुन्छ।'
आर्थिक अवस्थाले निकै कमजोर छन् उनीहरू। छुट्टभिन्न हुँदा आफ्नो भागको धेरै सम्पत्ति, भाँडाकुडा र लत्ताकपडासमेत दाइहरूले बेचेर खाइदिएको मोतीकला बताउँछिन्। 'अलिकति खेत थियो, त्यो चाहिँ मैले लडेर बेच्न दिइनँ,' उनी भन्छिन्, 'त्यै ५-६ रोपनीजति होला।'
अविवाहित चन्द्रबहादुरको काइँली भाउजुबाहेक अरू कोही अभिभावक छैन। 'त्यत्ति होचो मान्छेलाई कसले दिन्छ केटी बिहे गर्नलाई?' मोतीकला भन्छिन्, 'अब मै मात्र हुँ, उहाँको आमाबा, दाइभाइ, दिदीबहिनी जे भने पनि।'
कद होचो भए पनि चन्द्रबहादुर घरमा साना केटाकेटी खेलाउन, घर बढार्न, खाना बनाउन लगायत काममा सघाउँछन्। उमेरमा त गोठालासमेत जाने गरेको मोतीकला बताउँछिन्। 'मादल राम्ररी बजाउनुहुन्छ,' उनी भन्छिन्, 'नाच्न, गाउन सिपालु हुनुहुन्छ।'
उनलाई सबभन्दा पहिला हापुरे उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रिती केसीले २०६५ सालमा तुलसीपुर महोत्सवमा प्रदर्शनीमा राखेका थिए। उनको चर्चा सुरु भएको त्यसपछि नै हो। 'उनी ओझेल परेका थिए, आर्थिक अवस्था पनि कमजोर थियो, सबैले हेर्लान् भनेर महोत्सवमा राख्न पहल गरेँ,' केसीले भने, 'प्रदर्शनीबाट दुईचार पैसा होला भनेर मैले नै उनलाई बाहिर ल्याएको हुँ।'
तुलसीपुर महोत्सवमा सरिक भएपछि उनलाई अन्य ठाउँबाट पनि बोलावट आयो। उनी महोत्सवबाट कमाएको रकम सिधै भाउजुलाई दिने गर्थे। पछिल्लोपटक कैलालीमा महोत्सवमा जाँदा झापाका डाँगीहरूले पूर्वमा पनि लैजाने व्यवस्था मिलाए। उनका भतिजा दोलखबहादुर पनि सँगै गए। उनको चर्चा एकाएक चुलियो। गिनिजबुक आफ वर्ल्ड रेकर्डस्मा अंकित हुनु त्यसैको निरन्तरता हो।
'देवर बाबु कस्ता भया होलान्, चाँडै लिएर आइज भन्याछु' भाउजु मोतीकला भन्छिन्, 'महिना दिनभन्दा बढी भैगो नदेख्या, मलाई हेर्न मन छ।'
पूर्व कीर्तिमानधारी खगेन्द्र पनि खुशी
मनोज अधिकारी, पोखरा, फागुन १५- विश्वकै होचो व्यक्तिको प्रमापणपत्र आइतबार दाङका चन्द्रबहादुर डाँगीले पाएपछि सोही विधाका पूर्वकिर्तिमानी खगेन्द्र थापामगर खुशीले दंग परेका छन्। आफुले होचो व्यक्तिको रुपमा नेपालको नाम विश्वमा राखे पनि केही महिनाअघि यो उपाधि खोसिएपछि उनी खिन्न बनेका थिए। अहिले फेरी ७२ वर्षीय डाँगीले मुलुकको नाम गिनिज बुकमा राखेको सुनेपछि उनी खुशीले दंग परेका हुन्। 'मेरोतर्फबाट पनि उहाँ (डाँगी) लाई बधाई छ है' साता लामो नेपालगञ्ज महोत्सवबाट भर्खरै फर्केर घरमा थकाई मार्दै गरेका खगेन्द्रले भने,'जसले भए पनि नेपालको नाम राख्न सक्नु ठूलो कुरा हो।'
गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डस्ले आईतबार काठमाडौंमा सम्पूर्ण शारीरिक परीक्षण गरि डाँगीलाई विश्वकै होचो व्यक्ति भएको पुष्टिसहित प्रमाणपत्र दिएको हो। गिनिजका प्रधान सम्पादक क्रेग ग्लिन्डेका अनुसार डाँगीको उचाई ५४.६ सेमी छ।
यसअघि फिलिपिन्सका जुन्रे बालाविङ ९ महिनाअघि नेपालकै खगेन्द्र थापामगरलाई पछि पार्दै गिनिजको रेकर्ड चढेका थिए। खगेन्द्रले आफुसँग डाँगीको नम्बर भएको भए फोन गरेरै बधाई दिने इच्छा रहेको बताए।
'अहिले प्रत्यक्ष भेट्न वा फोनमा कुरा गर्न नपाए पनि कुनै बेला भेट भए बधाई दिन्छु' उनले भने।
खगेन्द्रले गिनिज बुक टोलीले डाँगीलाई प्रमाणपत्र दिने बेलामा पूर्वकिर्तिमानीको हैसियतमा आफुलाई सहभागी नगराएकोमा भने दुखेसो पोखे। आफुलाई विश्वकै होचो व्यक्तिको प्रमाणपत्र दिने गिनिजको टोलीसँग नेपाल आएको बेलामा भेट्न मन रहेको उनले बताए। नेपालकै अर्का व्यक्तिको किर्तिमान घोषणाको कार्यक्रम नेपालमै भएका बेला आफुलाई पनि बोलाएको भए हुन्थ्यो भन्ने खगेन्द्र थापामगर प्रतिष्ठानको भनाई छ।
'मसँग उहाँ (डाँगी) को फोन नम्बर पनि छैन' खगेन्द्रले भने,'भेट्न नपाए पनि नम्बर भएको भए फोनबाटै पनि बधाई दिन्थें।'
खगेन्द्रले २०६७ असोज २८ गते १८ औं जन्मदिनकै दिन विश्वकै होचो व्यक्तिको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएका थिए। खगेन्द्रको उचाई २ फिट २ दशमलव ४१ ईन्च अर्थात ६७ दशमलव शुन्य ८ सेमी छ। उनलाई प्रमाणपत्र दिन 'गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डस्का' उप-प्रमुख मार्का फ्रिगटीको टोली पोखरा आएको थियो।
फिलिपिन्सका जुन्रे बालाविङ गत जेठमा खगेन्द्रलाई पछि पार्दै विश्वका होचा व्यक्ति बनेका थिए। गिनिज बुकमा बालाविङको नाम लेखिएकै दिन गत जेठ २९ गते खगेन्द्र विश्वकै होचो व्यक्तिको हैसियतबाट बाहिरिएका हुन्। बालाविङ खगेन्द्रभन्दा मात्र २ दशमलव ४ इन्च होचा थिए। जेढ २९ गते १८ वर्ष पुगेकै दिन गिनिजको टोलीले खगेन्द्रको नाम हटाएर बालाविङलाई प्रमाणपत्र दिएको थियो।
पूर्वकिर्तिमानी खगेन्द्र पर्यटन वर्ष २०११ मा पर्यटन बोर्डको सद्भावना राजदूत समेत बनेका थिए। उनले यस क्रममा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अमेरिका, बेलायत, इटाली, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, बेल्जियम, हल्याण्ड, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, कतार, कोरिया, थाइल्याण्ड, भारत लगायतका मुलुकको भ्रमण गर्ने अवसर पाए। ८ महिना विश्वकै होचो व्यक्तिको रुपमा रहँदा उनले थुपै्र औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा प्रमुख आकर्षक अतिथिका रुपमा सहभागी हुने मौका समेत पाए।
हाल पनि उनी मुलुकका विभिन्न जिल्लामा हुने मेला तथा महोत्सवमा आकर्षणको केन्द्रका रुपमा सहभागी हुँदै आएका छन्। खगेन्द्र थापामगर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मीनबहादुर रानाकाअनुसार उनले हालै आधादर्जन जिल्लाका महोत्सवमा भाग लिईसकेका छन्। आयोजकहरुले खगेन्द्रलाई २५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिरेर मेलाको आकर्षणका रुपमा निम्त्याउने गरेका छन्।
'हामी भर्खरै एकसाता लामो नेपालगञ्ज महोत्वबाट फर्किएका हौं' रानाले नागरिकसँग भने,'केही दिनको आरामपछि अब छिटै धादिङ, बाग्लुङ र खैरेनी महोत्सवमा जाने कार्यक्रम तय भइसकेको छ।'
२०४९ असोज २८ गते बाग्लुङको धुल्लुबासकोट-६ का बाबु रुपबहादुर र आमा धनमायाको जेठो छोराका रुपमा खगेन्द्र जन्मेका हुन्। उनी गिनिजमा नाम लेखाउने प्रक्रियासँगै दुई वर्षदेखि पोखरा-८ सिमलचौरमा बस्दै आएका छन्।
खगेन्द्र मेला महोत्सव नहुँदा पोखराकै नागढुंगास्थित सरस्वती माविमा पढ्न जान्छन्। उक्त स्कुलले चाहेजति पढाउने सम्झौता गरे पनि बेफुर्सदीका कारण खगेन्द्र केही वर्षयता एलकेजीमै स्थीर छन्।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रानाले विश्वकै होचो व्यक्तिका रुपमा जसले नाम लेखाए पनि अहिलेसम्म खगेन्द्र अरुभन्दा अतिरिक्त पृथक र प्रतिभावाशाली रहेको दावी गरे।
'खगेन्द्रलाई उछिन्दै जो विश्वकै होचा भए पनि हामी खुशी छौं' उनले भने,'तर खगेन्द्र अरुभन्दा विल्कुल फरक छन्। उनले होचोसहित खुकुरी नाच र कमेडी विधामा पनि मेडल पाएका छन्।'
उनकाअनुसार धेरैजसो शान्त स्वभावका देखिए पनि खगेन्द्र बेला-बेला मुड चल्दा नाच्न र ठट्यौलीमा निकै रमाउने रसिक छन्।